About Us - Ningbo Ke Ming Makiinado Co., Ltd
Badiyay Wax ridaya
Ningbo Yinzhou Ke Ming Makiinado Warshadaha Co., Ltd.takhasusay soo saarka ee castings maalgashiga wax laga badiyay iyo waxyaabaha dhamaystirtay in steel carbon iyo steel daawaha yar yahay, waa qeybiyaha ah castings maalgashiga habka galaas biyo ah oo Shiinaha. Waxay ka kooban tahay 2 xarumaha waaweyn, steel macdantu shubay iyo warshad machining CNC oo noo saamaxaysa in ay soo gudbiyaan castings sax iyo waxyaabaha ku dhameysatay labada oo leh awood ah wax soo saarka sanadlaha ah ee in ka badan 10000 oo ton, iyo badeecada waxaa intooda badan laga dhoofiyay si Europe, America, Japan iyo kale meelaha adduunka oo dhan.
Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa magaalada caanka ah warshadaha Yinzhou, Ningbo ee Shiinaha. Waa arrin aad u habboon in la gaadhay la meel juqraafi faa'iidada badan. Shirkadda Our waxaa la aasaasay 2002, waxay qarinayaan meel tirada guud ee 5000 mitir oo laba jibbaaran oo hadda uu leeyahay in ka badan 50 employees.We leeyihiin warshad casriga ah iyo qalabka machining CNC sare.
waxyaabaha Our dabooli tiro balaadhan oo ah warshadaha oo ay ku jiraan tareen & tareen, gaari & gaari xamuul ah, mashiinada dhismaha, mashiinada macdanta, forklift, mishiinada beeraha, Dhismaha maraakiibta, mashiinada batroolka, dhismaha, waalka iyo bambooyin, mashiinka korontada, qalabka, qalabka xoog iyo wixii la mid ah. Waxaan nahay awood u leh in ay soo saaraan waxyaabaha sida ay sawiro macaamiisha ama shaybaarka, waxan xooga on steel carbon iyo steel daawaha hooseeyo labada. Ilaa maanta, in ka badan 100 alaabta ceeriin iyo 5,000 oo noocyada kala duwan ee wax soo saarka kala duwan Waxaa la soo saaray oo la soo saaray noo by. Waxaan nahay aqoon u leh heerarka kala duwan ee warshadaha, sida Chinese GB, ASTM American, Aisi, din Jarmal, Faransiis NF, Japanese JIS, BS British, Australia AS iyo Association of waddooyinka tareennada American (Aar) iyo heerarka kale ee warshadaha.
Xichemen, Jia Village, Yunlong Town, Degmada Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, Shiinaha 315135
Steel SAARKA guryaha EU Balanqaadyo PRICE KA ...